Madaxweynaha Somaliland oo ku dhawaaqay inuu cafis u fidiyey 279 maxbuus. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
July 19, 2021 Xuseen 8
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegto madaxweyne oo summaddeedu tahay JSL/XM/WM/222-697/072021, uu Cafis Guud u fidiyey Maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada Somaliland ku xidhan. Waxaanay u dhignayd Wareegtada Madaxweynuhu Sidan
Markaan Arkay: Dastuurka Somaliland, Qodobka 90aad, Xubintiisa 5aad; Markaan Arkay: Xeerka Ciqaabta Guud, Qodobkiisa 149; Markaan Tixgaliyey:
Warbixinta Taliska Guud ee Ciidanka Asluubta ee summaddiisu tahay TCA/G-1/208/2021, kuna taariikhaysan 17/07/2021; Markaan Arkay: Soo-jeedinta Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ee summaddiisu tahay XIG/JSL/192/2021, kuna taariikhaysan 17/07/2021;
Munaasibaadda Ciidal Adxa awgeed ee sannadka 2021, kuna beegan 1442; Waxaan Go’aansaday; In laga bilaabo taariikhda maanta aan Cafis Guud u fidiyo Maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan, oo tiradoodu dhan tahay 279 (Laba Boqol Sagaal iyo Toddobaatan) maxbuus.
Cafiskani saamayn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raadka ciqaabeed ee ka dhalanaysa dembiyadda ay ku xukunnaayeen, sida ku xusan qodobka 92aad ee Xeerka Ciqaabta Guud. Cafiskan waxa fulinaya Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, iyada oo la raacayo liiska Maxaabiista.
Alla Yaa Usheega!
Addoomahan Ilaahay inuu Biixi caffis ufidiyo baahiba umaqabaan ee isaga ayaa caffis uga baahan. Kiisu waa jeesjees ee kii dhabta ahaa ayaa isaga qoorta usuran.
Alle cindigii isaga ayaa daalim ka ah, iyaguna madluumiin. Maxay kaggeysteen oo ka galabsadeen? Yaa xaqaa usiiyay?
Biixi waa fallaag cimrigiisa kulaastay inuu ummad muslim iyo walaalo ah kalafaquuqo, kalaqoqobo, oo kala irdheeyo; isaga oo awaamirta Alle iyo Rasuulkiisa kucaasinaya oo kas iyo ogaalna ujebinaya.
Maamulka uu taliska kayahay ma aha mid Shareecada Islaamka kutagaan oo aawadeedna loodhisay, waa mid baadhil loodhisay oo utaagaan. Maamul aan Islaami ahaynna falalkiisa Alle hortii waa dulmi iyo xadgudubyo ay xisaab adagi sugayso kuwa hoggaanka isaga dhiga.
Haddii uusan xataa Islaami ahayn, waxaa kasiixun maamul uu daaquud iskugu dul salliday addoomo Ilaahay oo aan rabin oo raallina ka ahayn. Shacabkaas uu xabsiyada kudhex ciqaabay Shareecada Islaamka ma burinin, qiilasha uu Rabbi lahortegi doono Yowmul Qiyaamaha ayaa Biixi loogafadhiyaa inuu sii diyaarso.
Waxaana hubaal ah, in kumanaankaas madluumiinta ah oo isaga iyo adeegeyaashiisa caffiya mooyaanee aan dulmigaas weyn Alle cindigiisa sina looga qalleyn doonin. Waxaa yaab iyo amankaag ah inuu Biixi hurddaba lado marka xisaabta aakhiro kusugaysa baaxaddeeda laqiyaaso.
Kuwa dulmigiisa iyo baadhilka uu hoggaaminayo meelahan kutaageerana way lawadaagaan, qoraalladooda ayaana Alle hortiisa xujooyin uugu filan.
Mudane madaxweyne Biixi waa yowmufarax waciideyn waa ku mahadsantahay cafiskaas aad u fidisay Maxaabiista dhaqan celiska loo sameeyey.
Waar umadu hakaa ciido waalidan kala fadhiiso umada.
Bal waxaad malmalooqday dib u akhri ninyow miyaadan isu khajilin, cid kaa naxda oo wax kuu sheegta miyaad weydey waayo arinkaagu Waali xitaa wuu dhaafay kk.
Ilaahay umadiisa nabad geli Xaqa iyo baadilkuba labadaba ilaahay ayaa kala xaqaya hawl Diga kuu taal maaha,
Intaad cidkale wax ka sheegayso waano iyo taloba naftaada ka bilow iyadaa aakhiro lagu waydinaya waxba dadkale afka haku taagin naftada aalhiradeeda u shaqayso.
Yaa adiga kaa dulmi badan every singal day reer somaliland ayaad dusha ka saaran tahay caydooda iyo wax ka sheegooda yaa kuu dirtay maxaa kudaba dhigay maxaa lagaa siiyaa nacaybkooda maxay kugu sameeyeen????????
Dulmi iyo daalim intaba adigu iska baadh Boowe intaadan cidkale wax ka sheegin.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- قُلِ اَلْحَقَّ, وَلَوْ كَانَ مُرًّا
Ha noqon sida kan Baraawin sheegta ee intuu xaarka walaaqdo meel walbana ku saydhiyo xaarkiisa hadana With in mins quraan soo daliishada Waa mid laga subxaanaysti dhaqamada noocaasa ee munaafaqada ah.
Waan kaaga digayaa inta la munaafaqoodo wixii ladoonana lagu hadlo kadibna quraan lasoo daliishado cajiib oo cajiib.
Duqa naftaada ka bilow Wacadkan iyo waanadaba naftaada ku hab cidi kaagama baahna, maalin Ilaahay keeno qabiilo islaameed ayaad afka ku haysaa oo aad u tirisaa waa yaab iyo adakaa waxa kudaba dhigay ee lagaa siiyo.
Markaa jooji munaafaqada Carab iyo chinees meesha ma joogaane waa lays yaqaanaa.
Ninka taageeraya sow adiga kow kama tihid dulmiga jubooyinka ka socda oo Dadkii dhulkaa lahaa ee masaakinta ahaa Digil/mirifle/dir/sheekaal/iwm inta lagusoo duulay la bara kiciyey oo Cagdheer xun oo badow ah oo qoraxey iyo qabridahare kasoo qamaamay ku habsadeen jubooyinkii adiga iyo daalimiinta kaleba aad sida indho la’aanta ah u taageertaan yacni DAAROODISM kkkk.
Waar waa lays yaan laysu dhuuban.
Waxaad cidkale ku caayeyso ama aad ku colaadinayso Gundahaaga ka eeg adoo meel kale oo bood boodin sidii duqsigii Dalaq hana soo odhane.
Waxaad ku andacootay:
“maalin Ilaahay keeno qabiilo islaameed ayaad afka ku haysaa oo aad u tirisaa waa yaab iyo adakaa waxa kudaba dhigay ee lagaa siiyo.”
Qabaa’ilka oo ‘afka laguhayo’ waxay macnawiyan kadhigantay iyaga oo magacooda la xuso ama lasoo hadalqaado, taasuna dambi iyo caay toona ma aha ee adduunyada oo dhan ayay ka dhacdaa.
Waad jeclaan lahayd inaad igu eedeyso inaan qabaa’ilka “caayo” mise “aflagaaddeeyo”, laakiin waad ogtahay inaad eedda noocaas ah sixun ugu fashilmi lahayd maadaama ay masabbidaad kugu noqon lahayd oo wax daliil ahna usooxigan karin.
“Ninka taageeraya sow adiga kow kama tihid dulmiga jubooyinka ka socda oo Dadkii dhulkaa lahaa…”
Haddii aad kajaahilsantahay iyo haddii ay isyeelyeel kaatahayba, jubbooyinka aniguba waa ii degaan oo qarniyo dhowr ah ayaan kunoolaa – min Jilib iyo Jamaame ilaa iyo Kismaanyo. Haddeer aan kula doodayo adeerraday ayaa Kismaanyo kunool oo jiilkii saddexaad ku ah.
Digil iyo Miriflaha aad sheegayso dameerrahayagu abid ma wada daaqin oo aqoondarro baahsan ayaad kaahadaajisay. Bal carr halkan soodhig qabiil Soomaaliyeed oo abid Hartiga wax kasheegtay ama katabanaya, wir! Daliisheeda ayaa lagaaga fadhiyaa.
The same could not be said about your tribe, though. History attests to that fact.
Ogaadeenkuna cidna dulmi kumahayaan ee wixii soo gardarreysta ayay iska jidmariyaan oo taasuna waa ku raganimo ee ceeb ma aha. Wax iin ah ee aad igu wiiqdo ayaadan haysan oo ah sababta aad eedeymahaas jaban umiciinsatay.
Jariimooyinka iyo Aafoyinka jubooyinka lagu hayo cidwalba waa ogtahay waana arin lagu balamay in dhulkaa ka boobo Ssngadhuudhina loo soo kaxaysto sidii uu Cabdilaahi yuusuf’ba Amxaar ugu soo kaxaystay hawiye kuna xasuuqay taas mid la mida weeye waxa kasocda jubooyinka, waxaan xasuustaa berigii Ururkii Sahal iyo london wixii ka dhacay ee xitaa tvyada laysu habarwacday Umadiina yaabtay boobka loo badheedhayo.
Dadkii dhulka lahaa mar ay noqotaba way ciil buxi waa kelnada aan hadalka uga jeedo maadama aad adigu ka dhawaajisay Dulmi buu muuse wadaa,
Garoowe dulmigaa kasocda jubooyinka waa taageeraha 1aad waxayna cadayn buuxda u tahay in arin lagu heshiiyey si hoose reer ahaan ay tahay.
Raga ogaadeen ee meesha boobay kuligood kilinka ayay kasoo wada qamaameen xitaa kan Ahmed maadoobe waa reer qoraxay.
Yaa dabaaloo la qaldaa waar somali waa in is taqaan waxba yaan runta laga warwareegin.
Dhalashada qofku meeshuu doono wuu ku dhalan karaa aniguba caro dhulbahante ayaan ku dhashay laakiin kuma andacoon karo waa dhulkaygii markaa taa aad leedahay kismaayo wsxaan ku ahay degaan boqolaal kaloo cidwalba ayaa laga heleyaa oo degasn ah laakiin waxa kaga hadlayaa cida dhulka iska leh,, waxa jirey qorshayaal badan oo Daaquudkii Afweyne uu dawladiisii qabiilka ahayd uu dhulal badan si qaybaaladeysan ugu beeray Daaroodka cidwalba way ogtahay jubooyinka waa ka mid qorshaha ah in la boobo dadkii lahasna la bara kiciyo.
Waqtiga iyo waayaha ayaa kala cadayn doono dulmiga iy kuwa taageera iyo kuwa dhibahana ah ee waqti goor ay ahaataba u hiilin doono inshalah.
Dulmi diidoiw dulmi dugsade ha noqon
Jaafaajirriqleyntii fadhikudirirka loogabartay ayaad iigu jawaabtay su’aalihii rasmiga ahaa ee aan kugu xujeeyay, waxaadna sidaas ajligeeda iskucaddeeyay in aanay dacaayadahaagu sal iyo raad toona lahayn oo daliilna uhaysanin.
Daaroodkana dhegta uun baad kamaqashay ee, dulmiga isma faraan oo iskuma taageeraan; intaas waad ku been-abuuratay oo adna waad ogtahay. Midda jubbooyinka kusaabsan, marag buuxda ayay taariikhdu katahay in beelaha ay Hawiyuhu yassaan oo xaqiri jireen ay 100% dulmigii iyo bahdilkii karreysteen intii ay Daaroodku jubbooyinka sooddegeen.
Beelaha jubbooyinka afkooda ayaa laga bogtaa kalgacalka iyo walaaltinimada ay Daaroodka uqabaan, maadaama ay gabbood iyo gaashaan uga noqdeen dulmigii iyo xaqdarrooyinkii laguhayn jiray.
Marka aydin Siyaad Barre in nin 30 sanadood kahore aakhiro uhoyday kooreysataan ayaa la gartaa inaydin meel cidla ah wax karaadinaysaan oo dooddana kumarggateen – waa caadadiin. Haddii aad hayso caddaymo muujinaya inuu Siyaad Barre Daaroodka dhulboob iyo dulmiga aad ku andacootay faraya, fadlan nalawadaag.
Dhul iyo dad aad aqoon iyo khibrad kalahayn weligaa la iskuma ceebeeyo. Kutiri-kuteentana abidkaa ragga hakuladdoodin.
Ciid Mubaarak adigana.
Nin dhulkiisa ka taliyaa xagguu laga hayaa waa dambiile. Is cambaarayntu waa fanto.